MAQAAL-Safarkii Khatarta badnaa waxay ku waayeen Hooyadood | Faafan News
MAQAAL-Safarkii Khatarta badnaa waxay ku waayeen Hooyadood
FAAFANNEWS Akhriste ma ahan Tahriibka wax cusub oo mardhow billowday, balse waa yihii dambe waxaa soo baxayey sheekooyin badan oo naxdin kuwaasoo laga soo wariyey dad tahiirabay kuwaasoo badda ku dhintay markii ay safar khatar badan galeen.
Sheekadan maanta ayaa laga diyaariyey Wiil 10 jir ah iyo walaashiis oo 11 jir ah, oo ooyin afka furtay markii ay dhimmatay hooyadood oo ku wehlineysay safar dheer oo ka billowday Afrika balse iyadii ku dhimmatay badda u dhexeysa Libya iyo Talyaaniga.
Ujeedka qoyska ka yimid Afrika waxa uu ahaa in ay gaaraan Yurub, si ay u helaan nolal dhaanta wadankooda.
Labada carruurta ayaa u dhashay dalka Nigeria waxaana ay ka mid ahaayeen 150 qof oo qaxooti ka soo haajiray wadamada Saxaraha ka hooseeya, kuwaasoo la socday dooni aad u buuxda oo la badbaadiyey oo ka timid xeebaha Libya.
Sidda uu baahiyey CCTV, dadkan ayaa ku sii jeeday badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dalka Talyaaniga.
Carruurtan iyo dad kaleba waxaa badbaadiyey ciidamada dalka Spain oo ka mid ah ciidamo wadamo dhowr ah ka socda oo ku sugan xeebaha Talyaaniga oo la socda dhaqdhaqaaqa Tahriibayaasha ka immaanaya Afrika.
In ka badan 3,000 oo qof ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka iyagoo rabay in ay galaan Yurub, waxaana tiradaas 60% ay aad uga badan tahay sannadkii horre 2015-ka, siddaas waxaa yiri koox la socota dadka soo galootiga ah.
Si kastaba, Talyaaniga ayaa Khamiistii ku dhawaaqay Olole lagu joojinaayo Tahriibayaasha ka immaanaya Afrika, waxaana uu ciidamo dheeri ah geeyay xeebaha dalkiisa sidda uu ku warramay Jimcaha maanta ah Wargeyska Daily Mail ee Ingiriiska ka soo baxa.
Akhriste sheekooyinkan iyo kuwa kale oo badan oo naxdin leh waxaa maalin kasta laga wariyaa dadka Tahriibaya ee ka tagay Afrika ee nolal u raadsada Yurub balse wajaha qaar badan xaaladaas murugada leh.
Haddaba Su’aasha ayaa ah siddee lagu joojin karaa Tahriibka? oo hadda noqday Tusbax Afka ka furtay kaasoo aan la ogeyn xilliga la gunti doono.